Waxaa jira fursado software aan tiro yareyn video tafatirka, laakiin dhammaantiin ma waxaa la abuuray si siman. Oo waxaa muhiim ah in times hadda, qaar badan oo aadan weli taageero u 4K tafatirka. Ha hadhin - hoos ku qoran waxaad ka heli doontaa toban ka mid ah codsiyada video tafatirka ugu wanaagsan oo ugu kalsoon tahay in sameeyo taageeraan 4K videos; sida technology uu noqdo more si weyn loo isticmaalo bulshada sameynta filimka.
1-dii Wondershare 4K Video Editor
• Download videos ka goobaha la wadaago 1000+ video la One Click !.
• Si fudud u qoraan hoorto online videos.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa dib u furteen, doorasho fudud loogu video tifaftirayaasha aan rabin adayga, sifaatka aad u sareeya iyo qiimaha dheeraadka ah ee software xirfadeed video tafatirka. Waxaa qoreysa interface ah in loo abuuray u fududaato in la isticmaalo, laakiin sidoo kale waxaa jira fursad u doortaan dhexeeya Khabiirka ama hababka tafatirka Quick; ku xidhan tahay heerka xirfad iyo baahidaada.
Cool raaca waxaa ka mid ah Hollywood saamaynta style gaar ah oo xiiso leh, codad iyo arrimo cajiib ah. Qaababka kale ee xiisaha leh oo cusub waxaa ka mid ah Screen ku Green iyo fursadaha Muuqaal Ogaanshaha. Software ayaa sidoo kale si toos ah u hagaajin karaa footage la arrimaha nalalka ama midabka taas oo keeni karto in natiijada la dhamaadka ka badan la safeeyey.
Video-dejiyeyaasha raba, barnaamij heer video ah oo aad u awood badan xirfadeed tafatirka waxaa inta badan ka naxay tag qiimaha. Markaas oo ay ka heli CyberLink PowerDirector, ogaado in uu leeyahay wax kasta in codsiyada la tag ah qiimaha sareeyaa leeyihiin, iyo waxa la arkaa in ay fududahay ah si ay u isticmaalaan, in ka badan interface bilaabayso-friendly.
Waa adag tahay in la eego la soo dhaafay PowerDirector 12 Ultra haddii aad u baahan tahay taageero 4k, iyo haddii aadan rabin inay allabari on sifaatka aad u sareeya oo u oggolaan in aad sameysato xirfad videos raadinaya, xitaa haddii aad bilaabayso ama aad leedahay waayo-aragnimo yar la video tafatirka.
Daabacaaddii ugu dambeeyey ee PowerDirector taageertaa 64 Processor xoogaa u habaynta si dhakhso ah, iyo dabcan, taageero cusub oo 4K videos xal. At ka yar $ 100, CyberLink PowerDirector 12 Ultra yimaado la yaab leh ku dhow in ay noqoto sidii sare iyo karti sida software oo la jaban marar badan dheeraad ah oo ka badan; taas oo doorashada ugu saxsan ee miisaaniyada miyir enthusiast video tafatir ah.
Mid ka mid ah fursadaha sare dhamaadka video software tafatirka waa editor aadka caanka ah non-toosan Pro (NLE) Sony Vegas. Hadda ilaa version 13, software waxaa isticmaala aqoonyahannada iyo amateurs si isku mid ah. Vegas Pro 13 yimaado iyada oo taageero hooyo 4K video, iyadoo tirada jir ugu badnaan ilaa 4096 x 4096. Waxaa jira taageero hooyo files XAVC iyo XAVC S, oo lagu daray files ka Red Epic iyo Red One. Waxaa jira dhowr ah oo taas sii dheer iyo plugins ka mid Vegas Pro, oo ay ku jiraan Pro DVD Injineerka.
Taageero buuxi 4K tafatirka dhigeysa Vegas Pro safka hore ee software in noocani, halka sidoo kale waxaad edit karaa SD, HD, 2k iyo 3D videos, iyadoo la isticmaalayo jiita dareen Sony iyo hoos u interface. Waxaa jira tiro badan oo qalab iyo saamaynta heli karo, jidaynayey buuxda gacanta, hal-abuurka, iyo dabacsanaan gudahood deegaanka tafatirka taas oo si fudud u heli karaan kuwa dhici karta xitaa in brand cusub in videos tafatirka ee codsiga NLE ah ee.
Software waxaa laga heli karaa kharash dhan $599.95; iyo qiimaha waa mid keliya haddii aad xulan version download ah, ama version ah oo la soo baakadeeyey jirka.
Ugu $79.95 oo kaliya, Studio 13 Platinum waa kaliya tiro yar oo kharashka editor si buuxda u soo guuri Sony ee, Vegas Pro. Sony Movie Studio 13 Platinum waa codsi aasaasiga ah video tafatirka, ee debedda loogu soo bilow iyo guriga user. Iyada oo diiradda lagu saari doono siinta dadka isticmaala awood u leeyahay inuu si fudud loo abuuro oo la wadaagin videos ay bulshada goobaha warbaahinta, ama abuuraya DVDs gurigaaga, ee aalada iyo interface ayaa loogu talagalay in ay noqdaan kuwo fudud oo dareen leh intii suurto gal ah si ay u isticmaalaan, iyaga oo aan u ballaaran oo dheeraad ah kartida adag oo codsi sare dhamaadka sida Sony Vegas Pro.
Muuqaalada laga xusi karaa waxaa ka mid ah hab fudud oo ka mid ah xulashada qaabka ugu fiican ee wax soo saarka la hadal Samee Movie ah, doorashada la isticmaalayo Mode Edit Simple ama Advanced Edit Mode, Upload si toos ah u soomi YouTube 4K, Color Kulanka surin-in, iyo oo badan.
6. Adobe jilitaankii Pro CC
Waxa kale oo codsi tafatirka video in loo arkaa in ay dhamaadka sareeya waa Adobe ee Premier Pro. Sida ugu badan ee software Adobe ee, jilitaankii Pro hadda waa qayb ka mid ah qorshaha Creative Cloud. Tani waxay u baahan tahay bixinta lacag bil walba si ay u isticmaalaan codsiga via adeeg daruur Adobe ee.
Tirada sheer ah muuqaalada gudahood jilitaankii Pro CC waa ballaaran. Laakiin version ugu dambeeyay ayaa loogu talagalay inay siiso aalada dhakhso ah inta lagu guda jiro tafatirka, kaas oo la qadariyo doonaa labada cusub iyo Marexaan isticmaala si isku mid ah. Muuqaalada New in ay yihiin xusid mudan in version CC waxaa ka mid ah arrimo live qoraalka, kaas oo qaab aan muuqan isku leh ka dib Raadka, taageero hooyo kala duwan oo ka mid ah qaabab cusub, taageero toos ah ilaa Cloud ah, hagaajinta shareeraysaa iyo raadraaca, oo awood u leh inay u dhoofiyaan in qaabab heerka warshadaha cusub.
Qiimaha ugu yar si ay u helaan qorshaha CC oo ay ku jiraan jilitaankii Pro ah waa $29.99 bil kasta. Si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala badan tahay dhiiran tahay in ay doortaan $49.99 qorshe bil oo ka mid ah jilitaankii Pro oo Ka dib Raadka, iyo sidoo kale Photoshop iyo ka badan doonaa noqon.
Codsiga tafatirka Heerka xirfadeed video for computer Mac waa mid aad u fiican u yaqaan Apple Final Goo X. ee Pro si ballaadhan loogu isticmaalay in industry ee movie xirfadeed, iyo sidoo kale ka mid ah amateurs, version ugu dambeeyay yimaado iyada oo taageero buuxda xal buuxa 4K ProRes in durdurraa ka badan ( kaas oo la sameeyey shaqo gaar ah u soomi on Mac cusub Pro).
Waxaa jira boqolaal ka mid ah qaababka istaahila in liiska, si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan oo xiiso leh waxaa ka mid ah Jadwalka magnetic oo loo qoondeeyey si looga fogaado dhibaato u hagaagsan ama ka dhimman yar oo aan la rabin marka sixiddiisa, urur fudud ee warbaahinta la keywords iyo metadata, multicam clip tafatirka, channel multi tafatirka audio
Corel VideoStudio Pro X7 waa codsi tafatirka hooseeyo qiimaha video in qoreysa 64 yara habka xawaaraha iyo taageero 4K tafatirka. Waxay leedahay oo diiradda la saarayo deegaanka fudud shaqo la Corel ee u gaarka ah FastFlick hab tafatirka, kaas oo bixiya hab saddex tallaabo ah la abuuro videos iyo duubey ah.
Waxa kale oo taagan feature waa 4K Smart xoojinta ku daaqaan, taas oo ka dhigaysa guud ahaan 4K videos la taaban karo ka dhaqso badan ee qaybta hore ee software-ka. Qaababka kale ee muhiimka ah ee VideoStudio Pro X7 ka mid ah channels QuickTime Alfa, editor Cinwaan, animation joojiyo mooshinka, taageero multi-monitor, oo gacanta ku markii-darajo sare saamaynta iyo gacanta xawaaraha variable.
Movie Edit Pro 2014 waa xal kale video tafatirka awoodi karo ee guriga iyo hiwaayadda isticmaala in haatan uu leeyahay taageero buuxda u 4K videos. Codsiga waxaa lagu heli karaa saddex qeybood oo: aasaasiga ah, Plus iyo Premium, la version Premium ku jiraan qaababka iyo awoodaha inta badan.
Ayaa si toos ah iyo saaxiriinta, hidi in version aasaasiga ah ee Movie Edit Pro si fudud kuwa leh waayo-aragnimo yar ama aan lahayn waxa uu noqon karaa habka adag oo videos tafatirka. Software waxaa ka mid ah in ka badan 1500 oo lagu furdaamiyo iyo saamaynta, sixiddiisa ilaa 99 kuwan raadkaygay (ee Plus iyo versions Premium). Sidoo kale waxaa jira taageero multicam tafatirka, oo awood u leh inay si fudud ayaa loo kala duwan ee warbaahinta iyo website-video bulshada dhoofin aad alaabta la dhammeeyayna.
Pinnacle Studio Ultimate 17.5 waa doorasho video tafatirka la awoodi karo dadka isticmaala guriga iyo kuwa laga yaabo in ay kaliya bilaabaya. At ka yar $ 130, waxa ku jira qaababka badan sicirka ku dhegan muujin kara. Tusaale ahaan, 4K HD aalladda iyo taageero tafatirka 3D, in ka badan 2000 saamaynta, iyo Muuqaal ah oo u gaar ah screen live qabashada kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah uga shaashadda si aad videos u qoraan (faa'iido u bandhigyo iyo wixii la mid ah).
Waxa kale oo jira weyn boqortooyada free music iyo codadka maktabad, taageero qaab 3D stereoscopic, iyo wax soo saarka filaayo in ruuxaanta caanka ah sida Youtube, vimeo, Facebook, DVD Blu-ray iyo.
11. laxamiistaha AVID Media
Laxamiistaha Media ka AVID waa codsi xirfad heer oo ah is ku tilmaamay in ay "dhaqsiyaha badan software tafatirka video adduunka iyo nidaamyada". Tani waxay guud ahaan waa barnaamij bilowga ah ama aan joogtada ahayn users guriga laga yaabaa in la tixgeliyo, inkastoo qaababka ay awood badan yihiin qaar si ay u soo jiitaan kuwa ay ka dhab tahay in ay video tafatirka iyo wax soo saarka aan.
Laxamiistaha Media leedahay ballaaran feature ay ka mid yihiin in waqtiga dhabta ah iskaashi fog, qalab FrameFlex, korodhay gacanta ku raad audio, tafatir multicam 3D stereoscopic, si dhakhso ah howlgalka 64 yara, taageero u 4K, iyo sidoo kale 2k, 5K oo kala duwan oo ah qaabab kale iyo warbaahinta (oo ay ku jiraan filimada), dagdag ah in ay helaan warbaahinta sida ProRes oo cas oo aan transcoding, oo awood u leh inay wax ka bedel 3D sida ugu dhakhsaha badan footage 2D la saxar karo.
Kuwani sare iyo sare muuqaalada dhamaadka ha la timid qiimaha tag dhamaadka sare: $ 1299. Tani waxay racfaan ka qaadan doonto in kuwa gabi ahaanba halis ah oo ku saabsan la software video tafatirka ugu fiican, ugu horumarsan iyo xirfad laga heli karaa shaqeeya.
> Resource > Video > Top Software 10 4K Video ayeey 2015